Fitsaboana Proton ho an'ny homamiadan'ny ati-doha sy ny hazondamosina - Proton California
Fitsaboana Proton momba ny fitsaboana ny homamiadan'ny ati-doha sy ny hazondamosina
Miadia amin'ny homamiadan'ny atidoha sy ny hazondamosina miaraka amin'ny Precision toy ny laser
Ny teknolojia fanaraha-maso pensilihazo pensilihazo ataon'ny California Protons dia endrika tsara indrindra amin'ny fitsaboana taratra homamiadana izay ahafahan'ny dokoterantsika mikendry ny fivontosan'ny ati-doha sy ny hazondamosina amin'ny taratra avo lenta ao anatin'ireny faritra saro-takarina ireny, nefa misoroka ireo rafitra manakiana toy ny ati-doha, ati-doha. , fihary pituitary sy ny hozatra optika. Ny fitsaboana proton beam dia azo ampiasaina hanasitranana ny homamiadan'ny ati-doha.
Raha ampitahaina amin'ny fitsaboana fitsaboana pasifika pasifika taloha kokoa, ny teknolojia fanodinam-bolo avy amin'ny pensilihazo dia manome ny fikarakarana taratra ho an'ny homamiadan'ny atidoha sy ny hazondamosina ao anatin'ny 2 milimetatra ary amin'ny fikarakarana fatratra. Azontsika atao ny mamely ny fivontosan'ny fivontosana amin'ny alàlan'ny fivontosana ary manamaivana ny fihanaky ny vatan'ny taolana mahasalama. Zava-dehibe izany ho an'ny marary ny homamiadan'ny ati-doha sy ny hazondamosin'ny hazondamosin'ny hazondamosin'ny hazondamosin'ny hazondamosin'ny hazandrano. Ny fampihenana ny taratra amin'ireto tavy mahasalama manodidina ny fivontosana dia mety hampihena ny fahavoazana ateraky ny ati-doha anao, ny rafi-pitatitra, ny fahitana ary ny fihainoanao. Ny fampihenana ny poizina mifandraika amin'ny taratra dia mampitombo ihany koa ny fahafahan'ny marary mameno ny fitsaboana amin'ny fampiatoana na fanemorana kely kokoa.
Glioma sy hypothalamic fivontosana
Mivalona vonjimaika hazondamosina
Zavamaniry kibo na adnoma pituitary
Arovy ny rafi-rafi-pitondranao foibe, ao anatin'izany ny atidohanao, ny atidoha, ny glandite pituitary ary ny nerveo izay misy fiantraikany amin'ny fahitanao, ny fihainoanao ary ny fahaizanao môtô.
Tazony ho tsara ny fiainanao mandritra ny homamiadan'ny ati-doha sy hazondamosina fitsaboana
Mampihena ny voka-dratsin'ny homamiadan'ny ati-doha sy hazondamosina fitsaboana, anisan'izany ny vava, mandoa ary reraka
Ny fandinihana ny fandinihana ny fitsaboana proton ho an'ny kanseran'ny CNS dia mampiseho fa ny fitsaboana proton dia miteraka:
Ny tahan'ny fiveloman'ny marary Intracranial meningiomas1
Mihena ny loza mety hateraky ny fivontosan'ny voka-dratsin'ny tranonjaza mivalona meningioma2
Soa azo avy amin'ny fitsaboana Proton ho an'ny homamiadan'ny ati-doha sy ny hazondamosina
Ny teknôlôjian'ny fandinihana ny taram-penina dia mifehy mivantana ny proton mba hametrahana ny tampon-tranon'i Bragg - ny fotoana nametrahany ny angovo faran'izy ireo indrindra - mivantana ao amin'ny fivontosan'ny hazondamosina na atidoha. Izany dia ahafahantsika mikarakara ireo fivontosana mihanaka be kokoa sy manova ny fatra ao anaty fivontosana.
Ny fitsaboana protonolika mandroso dia mamela ny dokotera amin'ny fomba voafantina tsara kokoa amin'ny tariby miakatra amin'ny sela mikitroka ao amin'ny ati-doha sy ny hazondamosiko, ary mampihena ny fatra amin'ny sela miaro ny taova salama sy ireo sela mihintsy. Amin'ny toe-javatra sasany, izany dia naseho mba hanomezana fitsaboana haingana kokoa noho ny fitsaboana taratra X-ray na dia amin'ny toe-javatra sarotra aza.
Ny fampihenana taratra amin'ny sela ara-pahasalamana manodidina ny fivontosana izay mitaky fatra taratra taratra avo lenta dia mety hampihena ny fahasimban'ny faritra sy ny rafitry ny ati-doha, ny atidoha, ny fihary pituitary ary ny hozatra izay misy fiatraikany amin'ny fahitanao, ny fihainoanao ary ny fahaizanao moto. Tena zava-dehibe izany satria ny fahasimbana amin'ireo firafitra mora tohina ireo dia mety hanimba ny kalitaon'ny fiainanao.
Ny teknolojia fanodinam-bokatra amin'ny alàlanay dia mampihena ny taratra amin'ny tsoka amin'ny taolana, izay mety hampihena ny harerahana mifandraika amin'ny fitsaboana.
Tsy toy ny teknolojia taloha, ny drafitry ny fitsaboana amin'ny homamiadan'ny hazondamosin-tsolika dia azo ampidirina ao anaty solosaina ary vita ao anatin'ny iray minitra. Ny fitsaboana ihany koa dia tsy misy dikany ary azo alain-tahaka ka ahafahan'ny marary miverina haingana kokoa amin'ny asany isan'andro.
Miankina amin'ny sehatra sy ny karazana homamiadan'ny ati-doha sy ny hazondamosin-drazana, mety mitaky fandidiana ny simia, ny simia simika ary ny taratra dia mety ho an'ny kankerin'ny ati-doha sasany. Ny safidin'ny fitsaboana koa dia voakasiky ny taona, ny fahasalamana amin'ny ankapobeny sy ny safidin'ny tena manokana.
Fitsaboana ny homamiadan'ny ati-doha sy ny hazondamosina
Vokany & vokany maharitra
Ny fitsaboana fitsaboana Proton ny homamiadan'ny ati-doha na homamiadana amin'ny hazondamosina ao amin'ny California Protons cancer Therapy Centre any San Diego dia mety hanolotra valiny mitovy amin'izany amin'ny taratra X-ray manara-penitra, raha mampihena ny vokatra maharitra sy mety hanimba ny fiainana toy ny fahaverezan'ny fahatsiarovana, ny fiovana toetra, ny paralysis , sy ny fahitàna ary ny fandrenesana fandrenesana noho ny fahasimban'ny taratra amin'ny atidoha, ny hazondamosina ary ny fijerena fahitana ary fandrenesana fandrenesana. Izy io koa dia manome ny mety hampihena ny fotoana fitrandrahana ny homamiadana faharoa any aoriana any amin'ny fiainana noho ny fihenan'ny fihanaky ny taratra eo amin'ny vatan'ny taova mahasalama.
Fikarohana fikarohana manohana fitsaboana Proton ho an'ny homamiadan'ny ati-doha sy ny hazondamosina
1 Fitsaboana ny "scan-radiation proton radiation" ho an'ny meningiomas intracranial miverimberina
2 Ny atahorana ny fivontosana faharoa sy ny fatra amin'ny rafi-pandrefesana neurocognitive taorian'ny proton manohitra radion photonne ho an'ny meningioma mety maty
Ny fanombanana ny homamiadana faharoa voan'ny kansera amin'ny fitsaboana proton ary ny IMRT ho an'ireo taova ao anatin'ny sehatry ny taratra voalohany
Fandinihana drafitra fampitahana ho an'ny radioteran'ny protonoma ho an'ny tendan'ny atidoha
Ny fampitahana ny mety ho voan'ny kansera faharoa radiogen taorian'ny foton-tsary sy proton craniospinal irradiation ho an'ny marary medulloblastoma pediatric
Ny fanodinana ny loza mety ho an'ny fivontosan'ny valan'aretina intracranial ary tombantombana amin'ny poizina klinika miaraka amin'ny teknika fitsaboana fitsaboana taratra ho an'ny marary manana adenoma pituitary
Photon and proton therapy planning drafitra ho an'ny glioma malignant miorina amin'ny CT, FDG-PET, DTI-MRI ary fibre fibre.
Fitsaboana protam-beam ho an'ny fivontosan'ny CNS
Radiosurgery Proton ao amin'ny neurosurgery
Radiotherapy Proton ho an'ny rafitry ny rafitry ny rafitry ny rafitry ny rafitry ny foibe pediatric: vokatra ara-pitsaboana tany am-boalohany
Proton manohitra radion photon ho an'ny fivontosan'ny atidoha pediatric mahazatra: fampitahana ireo modely misy ny fitrandrahana fatra ary ny fifandraisany amin'ny fieritreretana